आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सर्वसाधारणलाई सहज - नेपालबहस
आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सर्वसाधारणलाई सहज
| ९:४५:५० मा प्रकाशित
१ चैत,खलङ्गा । जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाको नराकोटमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सर्वसाधारणलाई उपचार गर्न सहज भएको छ । गाउँमा धुलो र धुँवा हुने भएकाले आँखाका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
गाउँपालिका र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको समन्वयमा पहिलोपटक यहाँ आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको हो । यसअघि सदरमुकाम खलङ्गामा मात्रै थियो । गाउँबाट सदरमुकामसम्म आउँदा बिरामीलाई सास्ती हुने गरेको थियो । आँखा उपचार गाउँमै हुन थालेपछि बिरामीलाई निकै सहज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बताए ।
अब गाउँमै आँखा जाँच र औषधि पनि गाउँमै पाइने भएको छ । रोगी पहिचान गरेर गाउँपालिकामै विशेषज्ञ बोलाउन सकिने अध्यक्ष रावलले बताए । आँखा उपचार केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारी र भवनको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरेको छ ।
सो केन्द्रमा उपकरणको व्यवस्थापन नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले गरेको सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर बस्नेतले बताए । आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले उपचारसँग सम्बन्धित कर्मचारी राखेको गाउँपालिको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । उक्त उपचार केन्द्रले जिल्लाको क्षेत्र नं ९ख० का सर्वसाधारणलाई सेवा दिने छ । सोअन्तर्गत सिँजा गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीलाई उपचारमा राहत हुने सिँजाका प्रवक्ता नवीन शर्माले बताए ।
पहिले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले गाउँमा वर्षमा एक÷दुईपटक शिविर राखेर मात्र आँखाको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्ने गरेको थियो । गाउँका आँखाका रोगीको प्रकृतिका आधारमा विशेषज्ञ गाउँमै बोलाएर शल्यक्रिया हुने गाउँपालिका प्रवक्ता शर्माले बताए । आखाँका रोगीले उपचार खर्च अभावमा रोग लुकाएर गाउँमै थन्किनुपर्ने अवस्था अब नहुने, सकेसम्म स्थानीय सरकारले यहाँका गरिब र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क आँखा रोगको उपचार गरिदिने गाउँपालिका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
आँखालाई कसरी स्वस्थ राख्ने ? १ महिना पहिले
इच्छाकामनामा पहिलोपटक आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन ४ महिना पहिले
वृद्ध सासुको सम्पत्ति लिएर हेरचाह नगर्ने सुष्माका श्रीमान रेग्मी पक्राउ ४० मिनेट पहिले
सतर्कता नअपनाए मुलुक पुन: लकडाउन ! ५ दिन पहिले
राष्ट्रिय बिमा संस्थानको १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन ४ दिन पहिले
गायिका बनाइदिने प्रलोभनमा परेपछि किशोरीहरु भारत पुगेको खुलासा २ हप्ता पहिले
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै ४ हप्ता पहिले
प्रदेश प्रमुख झाद्वारा ३२औँ पटक रक्तदान १ हप्ता पहिले
गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएकालाई बाख्रा वितरण २ हप्ता पहिले
नेपाल पत्रकार महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदै १ हप्ता पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट ४ लाख १९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या ७४ लाख नाघ्यो १० महिना पहिले
सहमति खोज्ने सहमति गर्दै सकियो सचिवालय बैठक ९ महिना पहिले
पर्यटन क्षेत्रका समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : मन्त्री ढकाल ३ महिना पहिले
लागुऔषधसहित झापामा ३ जना पक्राउ २ वर्ष पहिले